Ngwakọta IT nlekota oru - Motadata
Leverage Ngosipụta arụmọrụ nke gburugburu IT ngwakọ
Nweta visibiliti 360 nke arụmọrụ metụtara ọrụ IT gbasaara n'obere ụlọ yana akụrụngwa igwe ojii.
Jikwaa Ụwa Abụọ n'ime Otu Ngwọta
Ụlọ ọrụ nwere akụrụngwa IT ọgbara ọhụrụ na-adabere na teknụzụ nwere njikọ, gụnyere ngwa, netwọkụ, nyiwe, ebe data, igwe ojii nkeonwe na ọha. Nke a na-emepụta nkewa na nchịkọta data na nlekota oru yana enweghị ike ịhụ ihe ndị nwere ike iduga n'oge.
Ngwakọ Cloud Observability
Nweta visibiliti zuru oke n'ime teknụzụ ejikọrọ ọnụ, nke gụnyere sava, ndị na-anya ụgbọ mmiri, usoro nchekwa, na ihe ọ bụla akọwapụtara ngwa ngwa.
Nkwanye ngwa ngwa
Mee ngwa ngwa ịgbakwunye akụrụngwa site na ịnakọta data arụmọrụ sitere na ngwaọrụ ọ bụla yana maapụ dabere na ya na netwọkụ.
Nleba anya ngwakọ ngwakọ
Hapụ ụlọ ọrụ ka ha lelee okwu ndị na-eyi ịdị adị ọrụ ha egwu ma mee usoro mmezi ngwa ngwa.
Ọhụụ zuru oke n'ofe ụlọ yana igwe ojii iji chọpụta arụmọrụ sistemu nke ọma
Nweta ngwa nlekota ngwaọrụ na teknụzụ gbasaa n'ofe akụrụngwa IT gị.
Nchịkọta data dị mfe site na isi mmalite achụsasịrị site na iji ndị nnọchite anya na usoro enweghị ọrụ.
Jiri ndebiri arụgoro arụgoro nyochaa ngwa iji hụ na ahụmịhe onye ọrụ njedebe kacha mma.
Wepụ ntụpọ kpuru ìsì na akụrụngwa IT gị
Ngwọta dị n'otu nke na-etinye metrik, ndekọ na data ntinye netwọkụ sitere na isi mmalite gbasasịrị wee na-enye data enwere ike ime na-enweghị mkpa ngwaọrụ nlekota isi.
Nweta data nke ịchọrọ n'ụzọ ịchọrọ na-enweghị asụsụ ajụjụ mgbagwoju anya.
Na-anakọta metrik, ndekọ, mmemme, okporo ụzọ na data nkwanye site na iji otu onye nnọchi anya.
Gafee akụrụngwa wee hụ Mmekọrịta Ngwa na akụrụngwa
Site na ịdepụta ụdị topology, ghọta ka akụkụ nke ọ bụla si metụta ibe ya.
Mee maapụ ngwa-na- akụrụngwa iji mara ndakọrịta n'etiti akụrụngwa na ngwa.
Lelee mgbanwe ozugbo na mmekọrịta IT dabere na usoro nchọpụta na mkparịta ụka okporo ụzọ.
Agbanwela n'etiti Consoles iji nweta a Foto jikọrọ
Mee nlekota oru metụtara
Mepụta ọnọdụ ka mma site na ekpokọtara data maka njirimara na mkpebi nsogbu ngwa ngwa.
Zenarị Downtimes dị oke ọnụ
Usoro nleba anya dị irè na-eme ka njirimara ngwa ngwa na mkpebi nke nsogbu.
Dashboard niile n'ime otu
Mepụta otu nleba anya nke netwọkụ, ihe nkesa na igwe ojii iji chọpụta data enwere ike ime.
Ụzọ na-emepe emepe
Nweta otu ngwá ọrụ na-etinye data n'ụdị dị iche iche ma na-enye njirimara mmekọrịta yana ịdọ aka ná ntị smart.
Mepụta nlele ọrụ azụmahịa
Kọwaa ọrụ ndị dị oke mkpa yana SLA ga-ezute iji mepụta usoro nke mkpa.
Jikwaa ike nke ML
Chọta omume ọrụ na-adịghị mma wee jikọta ha n'ime ọnọdụ ọrụ.
Kedu ihe bụ ITSM Automation? Ihe kpatara 10 iji nweta ITSM Au...